Zandary nanao fisafoana tamin'ny lalana miazo an’Ambodiangezoka no nahatratra vehivavy iray, 31 taona, nitondra rongony milanja 04 kilao. Avy any Ambodiadabo ity vehivavy ity, mbola nahitana tavoahangy nisy toaka gasy ary ody gasy ihany koa tany aminy. (Jereo Sary Tohiny)
Niisa 38 ny loza nitranga ny taona 2019 teo amin’ny sehatry ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy, ary 3 izany amin’izao fiantombohan’ny taona 2020 izao, nisy ny aina nafoy vokatr’izany. Misy ny paik’ady iarahan’ny Ministeran’ny Fitaterana, ny Fizahantany ary Famantarana ny Toetrandro sy ny APMF entina hampihenana io tahan’ny lozam-pifamoivoizana io sy ho fanatsarana ity seha-pitaterana ity.
Tinapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra farany teo, ny hakan’ny fanjakana ny tany voakasiky ny fanorenena toby vaovao fitehirizana solika eny amin’ny Kaominina Bongatsara, Antananarivo Atsimondrano. Tany mirefy 88ha no hiorenan’ilay fotodrafitrasa vaovao, izay hahakasika ny Fokontany Amboanjobe sy Ambohidrazana. Tamin’ny 2010 no efa nanomboka ny firesahana ny hamindrana ny toby fitehirizana solika eo Ankorondrano, izay tantanan’ny Logistique Pétrolière, hisorohana ny loza noho izy io afovoan-tanàna loatra.
Tonga nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fanombohana ny fankalazana ny faha-60 taonan’ny « Ecole Nationale d’Administration de Madagascar » (ENAM), sy ny taom-pianarana vaovao ho an’ny andiany faha-4 amin’ny fiofanana mitohy, eo anivon’izany ivon-toerana izany, ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, omaly, ary notron’ny Sekretera Jeneralin’ny governemanta, Ramatoa Razanadrainiarison Lucette, izay sady filohan’ny filankevi-pitantanan’ny ENAM rahateo, sy ireo Talen’ny kabinetra miaramila sy sivily eo anivon’ny Primatiora. Nisarihana ny sain’ireo mpiofana eo amin’ny maha-zava-dehibe ny andraikitra miandry azy ireo eto anivon’ny firenena ny fanazavana natao tamin’ny alalan’ireo fanamby atrehin’ny fanjakana ankehitriny, entina hitantanana sy hanatanterahana an’ireo vinam-pampandrosoana tarihin’ny Filohan’ny Repoblika, ary hampiharina amin’ny alalan’ny politika ankapoben’ny fanjakana, izay fitaovana rahateo ahafahana mamaha ny olana maro samihafa eto amin’ny firenena, na ao anatin’ny fotoana fohy izany, na lavitr’ezaka.
Mbola mitohy hatrany ny tsindry ataon'ny fikambanana avy any Antananarivo mitantana ny Complexe Sportif Mahajanga, tompony mangataka atiny ka teo ivelan'ny trano no natao ny hetsika rehetra nanamarihana ny 8 marsa, Andro iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy androany, fa ireo Egyptiana manao varotra fampiratiana ny ao anatiny. Ny 4 hatramin'ny 11 marsa 2020, no manofa ny Complexe Sportif, amin’ny sarany 5 tapitrisa Ariary ireo mpanao fampirantiana. Efa nisy ihany ny fifampiresahana sy fifanarahana omaly fa ho an'ny hetsika 8 marsa ny ampahany amin'ny trano hanamarihana ny fankalazana, ary efa vita avokoa ny fametrahana ireo fitaovana rehetra hoenti-manatanteraka izany, saingy androany maraina dia tsy nanaiky indray ireo mpanofa efa nandoa vola tamin'ny mpitantana na dia nisy aza ny fifampiresahana naharitra ela.
Nitondra fanazavana ny Antenimierandoholona tamin’ny alalan’ny Senatera Mpampakateny voalohany eo anivon’ity andrimpanjakana faharoa mpanao lalàna ity, Betina Bruno, mikasika ny vaovao niparitaka an-gazety mpivoaka isan’andro teto Antananarivo fa misy basy 5 very tao amin’ny Antenimierandoholona narahina fanamarinana nataon’ny avy eo anivon’ny Etamazaron’ny Tafika Malagasy. Milaza io taratasy io fa mankasitra ny finiavana nataon’ny avy eo anivon’ny Etamazaron’ny Tafika Malagasy ny Birao maharitry ny Antenimierandoholona tamin’ny fitsirihana tampoka natao ny 4 martsa 2020 mba hanamarinana ireo fitaovam-piadiana eo anivon’ity andrimpanjakana ity, saingy manamafy kosa fa manohitra ny fomba nentina nanatanterahana izany.
vendredi, 06 mars 2020 19:04
Lalam-pirenena faha-5: Ampahan-dalana mirefy 30 km no hatao « béton »
Nidina ifotony nijery ny fandroson'ny asa fanamboarana ny ampahan'ny làlam-pirenena faha-5 mampitohy ny tanànan'i Toamasina sy Foulpointe, ny ministry ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy miaraka tamin'ireo teknisiana androany zoma 06 martsa 2020 maraina. Ampahan-dalana mirefy 30 km no hatao latsa-tsimenitra (béton), noho ity faritra ity mando sy hiandronan'ny rano matetika. Nanararaotra izao fandalovana izao ihany koa ny Ministra nanome toro-marika ny orinasa mba hijerena akaiky ny fiarovana sy fiahiana ny zon'ireo mpiasa, ary mba hanomezana vahana ny mponina manodidina amin'ny fanomezana asa. (Loharanom-baovao: MATP) (Jereo Sary Tohiny)
Nosamborin’ny Zandary androany maraina i Fiherea, izay mpimasy ao Tandrokosy Kaominina Bemanonga, Distrikan’i Morondava, taorian’ny fitarainana nataon’ny ray aman-drenin’ny mpianatra noho izy ahiahiana ho tao ambadiky ny firongatry ny ambalavelona mahazo ny tovovavy mpianatra. Nahitana taolandavan’olombelona ihany koa teo amin’ny hazo teo an-tokontaniny. Mpampianatra tamin’ny fanjakana, efa misotro ronono ity mpimasy ity. Nisy ody gasy maromaro tra-tehaka nandritra ny nisamboran’ny Zandary azy. Hatolotra ny Fampanoavana eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany ao Morondava ny raharaha aorian’ny famotorana, araka ny nambaran’ny lehiben’ny mpanao fanadihadiana Randrianandrasana Julien Eric. (Jereo Sary Tohiny)
Voasambotry ny Zandary avy ao amin’ny Kaompania Ambohidratrimo ny tovolahy telo, tompon’antoka tamin’ny famonoana miaro fametavetana an-dRalivao Hélène, Tonian'ny Fikambanam-behivavy Loterana teo aloha ary vadina pasitera, nitranga ny 23 febroary 2020 teny Morondava, Kaominina Ambohibao Antehiroka. Niainga tamin’ny findain’ilay vadina pasitera izay lasan’ireto olon-dratsy ireto, taorian’ny heloka bevava nataon’izy ireo, ny fikarohana sy ny fitsongoana dia, ka nahatratrarana ny iray tamin’izy ireo teny Ambohimanarina omaly hariva. Izy io indray no avy eo no nanoro ireo namany, izay mbola teny Ambohimanarina ihany no nisamborana azy ireo androany, araka ny fanazavan’ny Kapiteny Rakotozafy Njaka, komandin’ny kaompanian’ny Zandarimaria Ambohidratrimo.